Umkhiqizi Wezinsimbi Zamazinyo, Into Yezandla Zamazinyo | YAYIDA
I-YAYIDA Inkampani Yezokwelapha Yamazinyo ekhethekile ngesivinini esikhulu nangejubane eliphansi lezandla zezandla nokukhiqizwa kwezingxenye
Isivinini esiphezulu samazinyo esiphezulu
Isivinini esiphansi se-Dental
Izingxenye zesandla sesandla sesandla
Ukukhanya kwe-Dental LED
Isikali se-Ultrasonic Scar
Umkhiqizi Wezinsimbi Zamazinyo
YAYIDA - Umenzi wemishini yamazinyo oyi-Professional handpiece yamazinyo, isihlalo samazinyo nokukhanya kwamazinyo kwe-LED kusukela ngo-2006
Ikhethekile ngejubane eliphezulu lamazinyo nocezu lwesandla esiphansi.
YAYIDA wamazinyo Colorful Big Power Dental LED Ukwelapha Isibani Esikhanyayo
1. Le nsimbi isebenzisa i-LED engenisiwe, ezwela ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka okuphezulu. Iyakwazi ukwelapha inhlaka enobude obungu-420-480nm futhi isetshenziselwa ukulungisa amazinyo emnyangweni we-stomatology.2. I-LED yamazinyo e-othodontics elapha ukukhanya isebenzisa izingxenye ze-SMOS ezingenisiwe, amandla azinzile, awanamsindo, akukho ukudlidliza.3. Isebenzisa umthamo ophezulu webhethri i-lithium-ion yokushaja, ingasetshenziswa izikhathi ezingaba ngu-80-100 uma igcwele amandla.4. Inebhethri ehlakaniphile yokuhlola isifunda lapho ugesi uphansi, izokhala futhi ukukhanya kuzokhanya.5. Amalambu okupholisa ama-LED angenazintambo anezinhlobo ezintathu: ukukhanya okukhulu, ukukhanya kancane kancane, nokukhanya kwe-pulse.
Inkampani yeYAYIDA ineqembu elilodwa elinentshisekelo lokuthengisa kanye nensizakalo yangemva kokuthengisa. Ngasikhathi sinye, nikeza isitolo esisodwa sokuthenga.
"Ikhwalithi yokuqala, Insiza kuqala". Gcizelela izinto zokusetshenziswa ezingenisiwe, amathuluzi, izakhiwo kanye nokulinganisa, ukuzama konke okusemandleni ukwenza imikhiqizo yethu isondele kwimikhiqizo efanayo esezingeni eliphezulu emhlabeni.
Inkampani isebenzise ukukhiqizwa kwe-ISO13485, iphikelela ekukhiqizeni imikhiqizo eyengeziwe yomhlaba wonke. Futhi sinikeza insizakalo ye-OEM / ODM.
Ngaphandle kokwenza kahle kwethu ebhizinisini le-ODM.
Sesivele sithumela amakhulu emikhiqizo yethu.
Uhlelo lokulawula ikhwalithi yomkhiqizo ngokuqinile.
Yonke iphrojekthi esisebenza kuyo ihlolwe ukuqinisekisa ikhwalithi.
Izixazululo ze-OEM ngokwezifiso
Inkampani yamazinyo i-YAYIDA ekhethekile ngesivinini esikhulu nangejubane eliphansi lezandla ezenziwe ngezandla, ucwaningo nentuthuko izingxenye ezintsha zamazinyo nemikhiqizo.
Inkampani yakwaYAYIDA inezinhlobo ezahlukahlukene zomshini we-NomuRADS waseJapan, ingahlangabezana nezinsizakalo zamakhasimende zokunemba ezihlukile.Imikhiqizo ekhethekile yamakhasimende, sigcizelela ukuthi akekho umphakathi futhi akukho okuthengiselwa amanye amakhasimende, ukuze kube ibhizinisi elinokwethenjelwa.
Siyakuthanda impilo, futhi sithanda imboni yamazinyo. Sithemba ukuthi imikhiqizo yethu yamazinyo ingenza odokotela neziguli ithemba ligcwaliseke kalula kalula ---- Yenza amazinyo aphile.
Inkampani isebenzisa ukukhiqizwa kwe-ISO13485, iphikelela ekukhiqizeni imikhiqizo eyengeziwe yomhlaba
Dental LED ngesivinini handpiece AYD-SLCM4
Abangane bethu bavakashela ifektri yethu, futhi bafuna ukwenza ukuhleleka okuhamba phambili kwejubane eliphakeme kanye nokuhleleka kwesivinini esiphansi. Bajabule ngozinti wethu wezandla nensizakalo yethu. Siyaqiniseka ukuthi kuzoba isikhathi eside ukubumbana. Ukwaneliseka kweKhasimende kuzoba isisusa sethu, sizogcina sithuthukisa ikhwalithi nenkonzo.